🥇 Ubalo-mali lombutho wonikezelo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 796
Ividiyo ye-accounting yombutho wokuhanjiswa
Oda i-akhawunti yombutho wokuhanjiswa
Uphuhliso lophuhliso lolwazi kwihlabathi lanamhlanje alimi ngxi. Rhoqo ngonyaka, kuvela itekhnoloji yamva nje yokunceda imibutho iqhube ishishini. Ndiyabulela kwi-automation yeenkqubo zoshishino, zonke izikhombisi ziphuculwe. Ukubalwa kwe-akhawunti yombutho wokuhanjiswa kwenziwa ngokusebenzisa inkqubo ekhethekileyo.
Inkqubo ye-accounting ye-Universal ithatha ukusetyenziswa kulo naliphi na ishishini, kungakhathaliseki ubungakanani bezibonelelo zemveliso kunye neprofayili yomsebenzi. Iinkonzo zolawulo lonikezelo zigcinwa rhoqo ngokulandelelana kwazo. Intengiselwano nganye yenziwa ngexesha lokwenyani. Umntu onoxanduva uyasekwa kwaye inombolo yolandelelwano yabelwe.
Kwi-accounting yokuhanjiswa kwemibutho ye-courier, kuyimfuneko ukubeka ingqalelo enkulu kwindlela yokuthutha iimpahla. Ubukho besithuthi sakho kwinkampani kufuna ulawulo olucokisekileyo. Kuyimfuneko ukwenza amanyathelo okugcina imeko yobugcisa, kunye nokuba, ukuba kuyimfuneko, umsebenzi wokulungisa.
Inkonzo yonikezelo yinkqubo enoxanduva kakhulu. Kuyimfuneko ukugcina iipropati zorhwebo kunye nokulawula umxholo kulo lonke uhambo. Ukupakishwa okuchanekileyo kwempahla kudlala indima ebalulekileyo, ngoko kufuneka unikezele ngolwazi olongezelelweyo xa ugqiba isivumelwano. Ukusebenzisa iitemplates zamaxwebhu asemgangathweni, inkqubo yokuzalisa amaxwebhu ithatha ixesha elincinci. Nangona ingcali ye-novice kwiinkonzo zokuququzelela ukuhanjiswa kwempahla inokumelana nomsebenzi onjalo.
Inkqubo ye-Universal Accounting System inamacandelo amaninzi awohlukeneyo inkampani enokuyikhetha kwimisebenzi yayo. Iinkonzo zonikezelo zisoloko ziphuculwa. Umgangatho ukhula kwaye, ngokufanelekileyo, imfuno iyakhula, ngoko ke ukuqaliswa koqwalaselo lwangoku luyimfuneko nje.
Yonke imibutho izama ukwandisa inzuzo yayo. Emva kwexesha ngalinye lokunika ingxelo, bahlalutya ubume bezalathi zezimali ezinceda ukwenza izigqibo zolawulo. Kwintlanganiso, iinjongo ezicwangcisiweyo kunye nemisebenzi yobuchule iyaxoxwa. Ukuba kuyimfuneko, utshintsho luyabhalwa kumgaqo-nkqubo wobalo-mali.
Ukubalwa kweenkonzo zombutho wokuhanjiswa kutshintshelwa kwimodi ezenzekelayo ukwenzela ukuphepha ukuphazamiseka okunokwenzeka kumsebenzi wabasebenzi. Ukulungiswa kweenkqubo usebenzisa inkqubo ekhethekileyo ikuvumela ukuba ubeke iliso kumsebenzi ngamnye, kunye nokubonelela ngengxelo ngalo naliphi na ixesha elikhethiweyo. Ngombulelo kumsebenzi wokukhetha kunye nokukhetha, unokwenza isicelo ngemilinganiselo kwaye ugxininise, umzekelo, indawo yokugcina impahla okanye umthengi.
Inkqubo ye-accounting ye-Universal iqulethe eyona ndlela ifanelekileyo, ebandakanya ukuziphatha okupheleleyo kwemisebenzi yezoqoqosho. Umncedisi we-elektroniki owakhelwe ngaphakathi kunye nenkxaso yobugcisa iya kunceda ukuba unemibuzo. Iigrafu ezikhethekileyo, abahluli kunye neencwadi zereferensi zikuvumela ukuba wenze imisebenzi eqhelekileyo kwifomathi efanelekileyo. Abaphuhlisi baye baqinisekisa ukuba umsebenzi okwinkqubo ufanelekile kwaye uyonwaba xa usetyenziswa.
Sebenzisa nakweliphi na isebe lezoqoqosho.
Ukuphunyezwa kwimibutho emikhulu nemincinci.
Ukungena kwinkqubo kuqhutywa kusetyenziswa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Ukudala ngokungenamda kweendawo zokugcina iimpahla, izahlulo, amasebe kunye neenkonzo.
Ukwenziwa kwekopi yogcino lwenkqubo yolwazi kumncedisi.
Iincwadi ezichanekileyo zereferensi kunye nabahluli.
Uhlaziyo lwedatabase ngexesha.
Ukuyila izicwangciso kunye neeshedyuli zexesha elifutshane kunye nexesha elide.
Utshintshiselwano ngolwazi kunye newebhusayithi yenkampani.
Ukulungiswa kobalo-mali kunye nengxelo yerhafu.
Ubalo-mali lwabasebenzi kunye nemivuzo.
Ukuthelekiswa kwezalathi ezicwangcisiweyo kunye nezichanekileyo ezisekelwe kwiziphumo zolawulo.
Iingxelo ezahlukeneyo, iincwadi kunye neemagazini.
Ukuhanjiswa kwezithuthi ngokweempawu zazo.
Ukuzoba uqikelelo lweendleko kunye noqikelelo lohlahlo lwabiwo-mali.
Ukuzimisela komthwalo womsebenzi.
Uhlalutyo lonikezelo kunye nemfuno yeenkonzo.
Ukubalwa kweendleko zeenkonzo.
Intlawulo usebenzisa iitheminali zokuhlawula.
Ubalo-mali lokuhanjiswa kwempahla.
Ukuchongwa kweentlawulo emva kwexesha.
Ukulandelela intengiselwano ngexesha langempela.
Imveliso yedatha kwiscreen esikhulu.
Ukuhanjiswa kweSMS kunye neeleta kwi-imeyile.
Ukuchongwa kunye nokulungiswa komtshato.
Uvavanyo lomgangatho weenkonzo ezibonelelwayo.
Umncedisi wombane owakhelwe ngaphakathi.
Iithempleyithi zeefomu ezisemgangathweni zamaxwebhu ahlukeneyo anelogo kunye neenkcukacha zenkampani.
Isiseko esimanyeneyo sababoneleli kunye nabathengi.
Ukubalwa komsebenzi wokulungisa kunye nokuhlolwa, ukuba kukho iyunithi ekhethekileyo.
Ukuzenzekela ngokupheleleyo kwemisebenzi.
Ukuphucula iinkqubo zoshishino.
Ulawulo lweengxelo zebhanki.
Ujongano lwangoku olusebenzisekayo.